အကောင်းဆုံး Forex Signals Telegram Groups - ဇွန်လ5အတွက် 🥇Top 2022 အခမဲ့။
နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 24 ဇွန်လ 2022 အချက်အလက်စစ်ပြီးပြီ
ဤဆောင်းပါးကို ရေးသားချိန်တွင် အတိကျဆုံး အချက်အလက်ကို ကိုယ်စားပြုရန် ဤဆောင်းပါးကို အမှန်ခြစ်ထားသည်။
A Forex အချက်ပြတယ် Telegram အဖွဲ့သည် သင်၏ငွေကြေး အရောင်းအ၀ယ်ကြိုးပမ်းမှုများကို နောက်တစ်ဆင့်သို့ ပို့ဆောင်နိုင်သည်။ သင်ထံမှကူးယူနိုင်သောကုန်သွယ်မှုအကြံပြုချက်များကိုသင်လက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ Tel4ram သို့ MTXNUMX သို့မရ။ ဤကုန်သွယ်မှုအကြံပေးချက်များသည်သင် ၀ ယ်လိုသည်၊ ၀ ယ်သည်၊ ၀ င်သည်နှင့်ထွက်ရန်အမှာစာများနှင့်မည်သည့်စျေးနှုန်းများတွင်ဖော်ပြထားသည်။
၎င်းသည် သင့်အား လက်ညှိုးထိုးရန်မလိုအပ်ဘဲ အတွင်းကျကျ နည်းပညာပိုင်းခြားစိတ်ဖြာမှုမှ အကျိုးကျေးဇူးရရှိစေပါသည်။ ထိုသို့ပြောခြင်းဖြင့်၊ Forex ကုန်သွယ်မှုမြင်ကွင်းသည် မယုံနိုင်လောက်အောင် လျင်မြန်စွာ ရွေ့လျားနိုင်သည်။
ထို့ကြောင့် Telegram မှသတိပေးချက်များကိုဖြန့်ဝေပေးသော Forex signal service ကိုအသုံးပြုရန်သင့်အားအကြံပေးပါသည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်သင်သည် Forex trading အခွင့်အလမ်းကိုဘယ်သောအခါမျှလက်လွှတ်မည်မဟုတ်ပါ။
ဤသည်မှာ Learn2Trade ကမ်းလှမ်းချက်တွင် အတိအကျဖြစ်သည် – ယနေ့ သင့်အား ပျမ်းမျှ အကြံပြုချက်5ခုကို ပေးဆောင်သည့် အပြည့်အဝ-ပြည့်စုံသော Telegram Forex အချက်ပြဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းထားသည်များအကြောင်း ပိုမိုသိရှိနိုင်ရန် ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါ။
Telegram ရှိ Forex Signals များကို အပိုင်းသုံးပိုင်းဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။
Telegram Forex အချက်ပြမှုများသည် အက်ပ်မှတစ်ဆင့် သင့်ထံပေးပို့သည့် ကုန်သွယ်မှုအကြံပြုချက်များကို ရိုးရှင်းပါသည်။ ၎င်း၏အခြေခံအကျဆုံးပုံစံတွင်၊ သင်ရွေးချယ်ထားသော အချက်ပြပေးသူသည် အောက်ပါပုံသဏ္ဌာန်တူသော ငွေကြေးအရောင်းအ၀ယ်အကြံပြုချက်ကို သင့်ထံ ပေးပို့နိုင်သည်-
အမှာစာ: AUD/CAD 0.9590 ဖြင့် ဝယ်ပါ။
ရပ်တန့်ဆုံးရှုံးမှု: 0.9520 ။
အမြတ်အစွန်း - 0.9690 ။
အထက်ပါအချက်များမှသင်မြင်တွေ့ရသည့်အတိုင်းသင်သွားလိုသောအရာအားလုံးကိုသင့်အားပေးအပ်ပြီးသင့်ရွေးချယ်ထားသော forex ပွဲစားသို့သက်ဆိုင်ရာအစွန်အဖျားကိုတင်ပေးပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ မည်သည့်အချက်ပြမှုနှင့်ဆက်နွယ်နေသည်၊ သင်ရှည်ရမည်၊ တိုသည်ဖြစ်စေ၊ မည်သည့် ၀ င်ရောက်ခြင်း၊ ရပ်တန့ ်၍ ဆုံးရှုံးခြင်းနှင့်အမြတ်အစွန်းယူသင့်သည်ကိုသင်သိသည်။
ထို့ကြောင့် Forex အချက်ပြမှုများသည် အလွန်ရေပန်းစားသည်။ ၎င်းတို့သည် သင်ကိုယ်တိုင် သုတေသနပြုလုပ်ရန် လိုအပ်မှုကို သက်သာစေပါသည်။ နောက်ဆုံးတွင်၊ နည်းပညာဆိုင်ရာညွှန်းကိန်းများနှင့် ဇယားဖတ်ကိရိယာများဖြင့် သက်တောင့်သက်သာရှိရန် နှစ်ပေါင်းများစွာ အချိန်ယူရနိုင်သည်။
Telegram မှတဆင့် Forex အချက်ပြမှုများကို အဘယ်ကြောင့် ဖြန့်ဝေသနည်း။
2 Trade ကို လေ့လာပါ – အာကာသအတွင်း လှုပ်ရှားနေသော အခြားသော Forex အချက်ပြပေးသူများကဲ့သို့ – Telegram မှတစ်ဆင့် စျေးဝယ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ဒါက အဓိက အကြောင်းအရင်းများစွာကြောင့်ပါ။ ပထမဆုံးနှင့် အရေးကြီးဆုံးမှာ Telegram ကို Google Play သို့မဟုတ် App Store မှတစ်ဆင့် ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့် မည်သူမဆို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်ပါသည်။
အက်ပ်ကို ထည့်သွင်းရန် မည်သည့်အရာမှ ပေးဆောင်ရန် မလိုအပ်သည့်အပြင် လစဉ် သို့မဟုတ် နှစ်စဉ် အခကြေးငွေ ပေးဆောင်ရန် မလိုအပ်ပါ။ ထို့ကြောင့် Telegram သည် ယခုအခါ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ သုံးစွဲသူ သန်း 400 ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ Telegram အက်ပ်သည် WhatsApp နှင့် အလားတူနည်းလမ်းဖြင့် လုပ်ဆောင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ သင်သည်အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုမှတဆင့် မက်ဆေ့ချ်များ ပေးပို့ခြင်းနှင့် လက်ခံခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်။
ဤနေရာတွင် Learn2Trade တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင် ကျွန်ုပ်တို့၏ Forex အချက်ပြ Telegram ဝန်ဆောင်မှုကို တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါသည်။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အတွင်းရှိ ထောင်ပေါင်းများစွာသော အဖွဲ့ဝင်များထံ Forex အချက်ပြမှုကို ပေးပို့သည့်အခါ အရေးကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ ကြေးနန်းအုပ်စုမက်ဆေ့ချ်ကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ပေးပို့သည်။ ရောက်သောအခါ သင့်ဖုန်းတွင် အကြောင်းကြားချက်တစ်ခု ပေါ်လာလိမ့်မည်။
စိတ်တူကိုယ်တူအဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူ Telegram Forex Signal အသိုင်းအဝိုင်း
Learn2Trade မှ Telegram Forex အချက်ပြဝန်ဆောင်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်ရသည့်နောက်ထပ်အကြောင်းပြချက်မှာ application ၏အသိုင်းအဝိုင်းဖြစ်သည်။ ဥပမာ Forex Signal ၀ န်ဆောင်မှုကိုသင် ၀ င်ရောက်ပါက Telegram အုပ်စုထဲသို့အလိုအလျောက်ရောက်လိမ့်မည်။
ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်သင်သည် Forex မြင်ကွင်းတွင်တသမတ်တည်းတိုးတက်မှုရလိုသောအခြားစိတ်တူသောအသင်းဝင်များနှင့်ချိတ်ဆက်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်းသားအချို့သည်အတွေ့အကြုံရှိကုန်သည်များဖြစ်သော်လည်းအခြားသူများမှာမူအသစ်အဆန်းများဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်၏ Forex အတွေ့အကြုံမည်သို့ပင်ရှိစေကာမူ၊ သင်သည်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ချင်းများနှင့်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Forex signal Telegram အဖွဲ့မှတဆင့်တည်ဆောက်ခဲ့သောကုန်သွယ်ရေးအသိုက်အ ၀ န်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဂုဏ်ယူသည်။ လူတိုင်းတစ်ယောက်ချင်းစီကိုကူညီရန်အတွက်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ယောက်သည် GBP / USD ဇယားများ၌နည်းပညာဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါကသူတို့၏တွေ့ရှိချက်များကိုအုပ်စုသို့အကြောင်းကြားနိုင်သည်။
အခမဲ့ Forex Signals ကြေးနန်း
လျင်မြန်သောအင်တာနက်ရှာဖွေမှုကိုလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်၊ သင်သည် အခမဲ့ Forex အချက်ပြမှုများ Telegram အဖွဲ့များစုပုံဖြင့် ရေလွှမ်းသွားဖွယ်ရှိသည်။ ယခုတွင်၊ ငွေကြေးရောင်းဝယ်မှုဈေးကွက်ကို တသမတ်တည်းဖြစ်စေရန် လွယ်ကူသောလုပ်ဆောင်ချက်မဟုတ်ကြောင်း မှတ်သားထားရန် အရေးကြီးပါသည်။
ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနှင့်၊ စျေးနှုန်းဇယားများနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာညွှန်းကိန်းများကို ထိထိရောက်ရောက်ဖတ်ရှုရန်၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်နှင့် ဘာသာပြန်ဆိုရန် အတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းများစွာကြာပါသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်၊ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူတစ်ဦးသည် အခမဲ့ Forex အချက်ပြမှုများ Telegram အဖွဲ့ကို ကမ်းလှမ်းနေပါက၊ တစ်ခုဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိပါသည်။ ဖမ်း.
ဘာလို့လဲဆိုတော့ signal provider ကသူတို့ရဲ့ Secret Sauce ကိုဘာလို့အခမဲ့ပေးလိုက်တာလဲ။ ကျွန်ုပ်တို့များသောအားဖြင့် Telegram အုပ်စုသည်အခမဲ့ Forex အချက်ပြအချက်အလက်များသည်သော့ချက်ကျသောအချက်အလက်များကိုဖယ်ရှားပေးလိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်ပံ့ပိုးသူသည် AUD / NZD ကို ၁.၀၈ တွင်တိုတောင်းရန်ပြောလိမ့်မည်။
သို့သော်လည်း လိုအပ်သော ရပ်တန့်အရှုံးနှင့် အမြတ်အစွန်းစျေးနှုန်းများကို သင့်အားမပေးပါက - သင့်တွင် ထွက်ပေါက်နည်းဗျူဟာတစ်ခု မရှိပါ။ တစ်နည်းအားဖြင့်၊ အခမဲ့ Forex အချက်ပြမှုများကို Telegram အဖွဲ့မှ ပျက်ပြယ်သွားသော ဒေတာကို ရရှိရန် နောက်ထပ် ပေးဆောင်ရန် တောင်းဆိုပါမည်။
2 Forex ကြေးနန်းသင်္ကေတများလေ့လာသည်။ သူတို့ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်ကြသလဲ။
အကယ်၍ သင်သည် Learn2Trade နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ထိပ်တန်းအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို လေ့လာရန် ကမ္ဘာနှင့် လုံးဝအသစ်ဖြစ်ပါက Telegram Forex အချက်ပြဝန်ဆောင်မှုသင်သိလိုသမျှကို ရှင်းပြကြပါစို့။
Telegram Forex Signals ကို In-House Trading Team မှ ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
ဦးစွာနှင့် အရေးကြီးဆုံးမှာ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ထိပ်တန်းအဆင့်သတ်မှတ်ထားသော Telegram Forex အချက်ပြမှုများကို မည်သည့်နေရာမှ ရရှိသည်ကို သင်အံ့သြနေပေမည်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင် ကျွန်ုပ်တို့၏ လန်ဒန်အခြေစိုက်ရုံးတွင် ဤနေရာတွင် အတွေ့အကြုံရှိ အိမ်တွင်းကုန်သည်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရှိသည်။
ဤကုန်သည်များသည်ငွေကြေးရောင်းဝယ်မှုစျေးကွက်များကိုနာရီနှင့်တစ်ပြေးညီစစ်ဆေးရန်တာဝန်ရှိသည်။ ဤနေရာတွင်အဓိကသော့ချက်မှာအချို့သောလမ်းကြောင်းများပေါ်ပေါက်လာပါကအလားအလာရှိသောကုန်သွယ်မှုအခွင့်အလမ်းများကိုရှာဖွေရန်ဖြစ်သည်။ ဤအရာကိုရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သည်နည်းပညာဆိုင်ရာညွှန်းကိန်းများနှင့်ဇယားဆွဲရေးဆွဲသည့်ကိရိယာများကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။
အလားအလာရှိသောကုန်သွယ်ရေးအခွင့်အလမ်းကိုရှာခြင်းသည်စစ်ပွဲ၏ထက်ဝက်မျှသာဖြစ်ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြသင့်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်သင်ခန်းစာ ၂ ကုန်သွယ်ရေးတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိရောက်မှုအရှိဆုံးနှင့်စွန့်စားရလွယ်ကူသည့် ၀ င်ထွက်ပေါက်နှင့်ထွက်ပေါက်များကိုစစ်ဆေးရန်ကြိုးစားလိမ့်မည်။ သင်သိသည့်အတိုင်း၎င်းတွင် ၀ ယ်ခြင်း / ရောင်းချခြင်းအမိန့်များ၊ ရပ်တန့်မှုဆုံးရှုံးခြင်းအမိန့်များနှင့်အမြတ်ယူခြင်းအမိန့်များအတွဲလိုက်ပါ ၀ င်သည်။
အကြံပြုထားသော Forex ရောင်းဝယ်ရေး အမှာစာများကို သင်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
မည်သည့်ကုန်သည်မဆို Forex မြင်ကွင်းနှင့်ထိတွေ့သောအခါသင်၌အမြဲတမ်းဝင်ပေါက်နှင့်ထွက်ပေါက်အစီအစဉ်ရှိရမည်ဟုပြောလိမ့်မည်။ တ ဦး တည်းမရှိရင်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်တွင်းကုန်သည်များအဖွဲ့သည်အမြတ်အစွန်းနှင့်စွန့်စားရသည့်အကျိုးကျေးဇူးများကိုအမြဲတမ်းစိတ်ထဲထားရှိလိမ့်မည်။ ကျနော်တို့ကဒီမရောက်မီ။ ဒီအရေးကြီးတဲ့ ၀ င်ပေါက်စျေးနှုန်းနဲ့စကြရအောင်။
Forex Trading Signal တိုင်းတွင် ဝယ်/ရောင်း စျေးနှုန်းပါရှိပါသည်။
အချို့သောကိစ္စများတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ Telegram forex အချက်ပြမှုများသည် အကြံပြုထားသော ဝယ်ရန် သို့မဟုတ် ရောင်းရန် ကန့်သတ်စျေးနှုန်းဖြင့် အမြဲလာပါသည်။ ဤစည်းမျဉ်း၏ တစ်ခုတည်းသောခြွင်းချက်မှာ ကုန်သွယ်မှုအခွင့်အလမ်းကို ချက်ချင်းလက်ငင်းဆုပ်ကိုင်ထားရန် လိုအပ်ပါက၊ ဆိုလိုသည်မှာ စျေးကွက်အော်ဒါတစ်ခု ထားရန် သင့်အား ပြောပြမည်ဟု ဆိုလိုသည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, Telegram မှတစ်ဆင့်သင်ပို့သောကန့်သတ်ချက်မှာစျေးကွက်ထဲသို့ ၀ င်ရောက်ရန်အသင့်တော်ဆုံးစျေးနှုန်းဖြစ်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်ဆိုရသော်သင့်အနေနှင့် EUR / JPY ကိုတိုတောင်းသင့်သည်ဟုယူဆကြပါစို့၊ ၎င်းသည်လက်ရှိတွင် ၁၂၃.၀၆ ဖြစ်သည်။
ဤစုံတွဲသည်ရောင်းရန်အမိန့်ဖြင့်ဖြတ်တောက်သင့်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ထင်ကောင်းထင်သော်လည်း 123.06 သည်စျေးကွက်ထဲသို့ ၀ င်ရန်ကောင်းသောစျေးနှုန်းဖြစ်သည်ဟုမထင်ပါ။
အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်း၊ သင်၏ရောင်းရန်ကန့်သတ်မှုအမိန့်ကို 123.78 တွင် ထည့်သွင်းရန် အကြံပြုနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ပေးပို့သော Telegram Forex Signal တိုင်းတွင် Take-Profit Price ပါရှိပါသည်။
အဲဒါကို မမှားပါစေနဲ့။ ကျွန်ုပ်တို့ သင်ပေးပို့သော Telegram Forex အချက်ပြမှုတိုင်းတွင် အမြတ်အစွန်းယူမှု စျေးနှုန်းပါရှိပါသည်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင်၊ ဤသည်မှာ ကာလတိုအတွင်း ရောက်ရှိရန် သက်ဆိုင်ရာ Forex အတွဲဟု ကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည်သည့် စျေးနှုန်းဖြစ်သည်။
ထိုသို့ဖြစ်လာလျှင်၊ သင်၏ ၀ ယ်ယူအမြတ်မှာယူမှုသည်သင်၏အနေအထားကိုအလိုအလျောက်ပိတ်လိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ Telegram Forex အချက်ပြမှုများကို စနစ်တကျချဉ်းကပ်လေ့ရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပုံမှန်အားဖြင့် 1:3 စွန့်စားရ/ဆု အချိုးကို ယူပါမည်။
ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အများဆုံးဆုံးရှုံးမှုကို ၁% လုပ်ရန်ဆန္ဒရှိပါကကျွန်ုပ်တို့၏အမြတ်အစွန်းရည်မှန်းချက်သည် ၃% ဖြစ်လာလိမ့်မည်။
ယူအမြတ်ယူမှုအမိန့်များကဲ့သို့ပင် Stop-loss အမိန့်များသည် Telegram forex အချက်အလက်များအားလုံးပေးလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ အထက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့အတိုချုပ်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းကုန်သွယ်မှုသည်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်သို့ရွေ့လျားနေပါက၎င်းသည်စျေးနှုန်းသာဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးများသောစွန့်စားမှု / အကျိုးဆောင်အချိုးအစား ၁း၃ ကိုစွဲကိုင်ထားပါကကျွန်ုပ်တို့၏ရပ်နားရန်ဆုံးရှုံးမှုကို ၁% အဖြစ်သတ်မှတ်မည်။
ငါတို့ GBP / USD ကိုရောင်းနေတယ်ဆိုပါစို့ - လက်ရှိစျေးနှုန်းကတော့ ၁.၂၉၇၈ ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၁% Stop-loss အမိန့်ကိုရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့သည် ၁.၂၈၄၉ စျေးနှုန်းကိုသတ်မှတ်ရန်လိုအပ်သည်။
ဆိုလိုသည်မှာ GBP / USD သည်ဤကိန်းဂဏန်းသို့ကျဆင်းသွားမည်ဆိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်သွယ်ရေးကိုပိတ်ပစ်မည်ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ဆုံးရှုံးမှုများကို ၁% အထိလျှော့ချနိုင်သည်။
အရေးကြီးသည်မှာ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ Telegram Forex အချက်ပြမှုများသည် သင့်အား အလွန်အန္တရာယ်ကြီးသောပုံစံဖြင့် ကုန်သွယ်မှုပြုနိုင်စေကြောင်း သေချာစေပါသည်။
အထက်ဖော်ပြပါအရာအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်တွင်းကုန်သည်များအဖွဲ့ကတွက်ချက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်၎င်းတို့သည်သတင်းအချက်အလက်များကို Telegram forex အချက်ပြအဖွဲ့ဝင်များသို့ဖြန့်ဝေသွားမည်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ပြုခြင်းအားဖြင့်အသင်းဝင်အနေဖြင့်သင်သည်သင်၏တယ်လီဖုန်းတွင်စာအသစ်တစ်ခုရှိကြောင်းသင့်အားအသိပေးခြင်းဖြင့်သင်၏မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းပေါ်တွင်အသိပေးချက်တစ်ခုရရှိလိမ့်မည်။
ပုံမှန်အားဖြင့်၊ (ကျွန်ုပ်တို့) မှ မက်ဆေ့ချ်ပို့လိုက်သော သင့်ဖုန်း၏ထိပ်တွင် သင်တွေ့နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ထိုမက်ဆေ့ချ်၏ ပထမဝါကျနှစ်ကြောင်းကို သင်မြင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် သင်လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည်မှာ Learn2Trade သို့ တိုက်ရိုက်သွားရန်အတွက် မက်ဆေ့ချ်အကြိုကြည့်ရှုခြင်းကို နှိပ်ပါ။ Telegram Forex အချက်ပြအုပ်စု.
ကရိယာတန်းဆာ: EURCAD (INTRA DAY)။
စျေးနှုန်း: 1.5510 ။
ရပ်: 1.5600 ။
target က: 1.5389 ။
အကြံပြုအန္တရာယ်: 1% ။
RRR: 1: 2။
ယခုသင်သတိထားမိခဲ့သည့်အတိုင်း၊ EUR / CAD ရှိကုန်သွယ်မှုသည်စွန့်စားမှုနှင့်အကျိုးခံစားခွင့်အချိုး 1:2ရှိသည်။ သေချာတာပေါ့၊ ငါတို့ကိစ္စတော်တော်များများမှာ 1:3ချဉ်းကပ်နည်းကိုသုံးတယ်၊ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, Forex ကုန်သွယ်မြင်ကွင်းတစ်ခုအလွန်ရှုပ်ထွေးပြီးကွဲပြားခြားနားစစ်မြေပြင်သည်။
ထို့ကြောင့်အချို့ဖြစ်ရပ်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အနည်းငယ်ကွဲပြားသောချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်သောကုန်သွယ်ရေးအကြံပြုချက်ကိုတင်ပြနိုင်သည်။ အဆုံးဂိမ်းသည်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်သွယ်မှုမှအမြတ်အစွန်းအများဆုံးရရန်ရည်ရွယ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Telegram Forex အချက်ပြမှုသည် 'အကြံပြုထားသော အန္တရာယ်' အဆင့် 1% ပါ၀င်ကြောင်းလည်း သတိပြုမိပေမည်။ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ Telegram Forex အချက်ပြမှုများတွင် ပါဝင်သည့်အရာဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည် ဤအထူးအကြံပြုချက်တွင် သင်အန္တရာယ်သင့်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ထင်သည့် ကုန်သွယ်မှုအရင်းအနှီးပမာဏနှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။
ဥပမာအားဖြင့် အကယ်၍ သင်၏ Forex ပွဲစားစာရင်းသည်ဒေါ်လာ ၂၀၀၀ ဖြစ်လျှင် ၁% အကြံပြုထားသည့်အန္တရာယ်အဆင့်ကသင့်အားဤရာထူး၌ဒေါ်လာ ၂၀ လောင်းမည်ဟုမြင်လိမ့်မည်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, ငါတို့အကြံပြု stop-loss အမိန့်စျေးနှုန်းနှင့်အတူမရောထွေးသင့်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Telegram Forex Signal များကိုလုပ်ဆောင်ခြင်း
ဒါဆို2Trade ကို ဘယ်လိုလေ့လာရမလဲဆိုတာ သိပြီပေါ့။ Telegram Forex အချက်ပြ စနစ်အလုပ်လုပ်တယ်။ ယခု ကျွန်ုပ်တို့၏ အကြံပြုချက်များကို ဆောင်ရွက်ပေးသည့် လုပ်ငန်းစဉ်ကို ရှင်းပြရန် လိုအပ်ပါသည်။ အရေးကြီးသည်မှာ၊ အရေးကြီးသောသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသောအွန်လိုင်း Forex ပွဲစားကိုသင်အသုံးပြုရန်အရေးကြီးပါသည်။
၎င်းနှင့်ပတ်သက်၍ မမှားပါနှင့် - ဂုဏ်သိက္ခာရှိသော အဖွဲ့အစည်းမှ လိုင်စင်ရရှိထားသော အွန်လိုင်း Forex ရောင်းဝယ်ရေးဆိုက်ကို အသုံးပြုရပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုလေ့ရှိသော ပလပ်ဖောင်းအများစုကို ကြိုက်နှစ်သက်မှုများဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားသည်။ FCA (ယူကေ)၊ CySEC (ဆိုက်ပရပ်စ်) နှင့်/သို့မဟုတ် ASIC (Australiaစတြေးလျ) ။ နောက်ဆုံးတွင်၎င်းသည် ၁၀၀% လုံခြုံပြီးလုံခြုံသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ Telegram forex အချက်ပြမှုများကိုလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
Forex Signal Telegram တွင် ပံ့ပိုးထားသော အတွဲများ
ကျွန်ုပ်တို့၏ Telegram Forex အချက်ပြမှုများသည် အဓိကနှင့်အသေးစားအတွဲများကို အဓိကထားသော်လည်း၊ ဤသည်မှာ အမြဲတမ်းမဟုတ်ပေ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနှင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ အိမ်တွင်းကုန်သည်များအဖွဲ့သည် အရည်အတွဲများထက် အမြတ်အစွန်းရနိုင်သော အခွင့်အလမ်းများကို မကြာခဏ ရှာဖွေလေ့ရှိသည်။
ဥပမာအားဖြင့်၎င်းတွင်တောင်အာဖရိကရုန်းသို့မဟုတ်ကင်ညာရှယ်လီပါရှိသည်။ ဤအချက်ကိုစိတ်ထဲ ထား၍ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်အဓိကနှင့်အသေးစားဌာနများတွင်သာမကသာမကထူးခြားသောအရောင်းအ ၀ ယ်များတွင်ပါအတွဲလိုက်ပုံများကမ်းလှမ်းသော Forex ပွဲစားကိုအသုံးပြုရန်အကြံပြုလိမ့်မည်။
ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်၎င်းသည် Telegram signal ရောက်ရှိသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အရောင်းအ ၀ ယ်အကြံပေးချက်များကိုအမြဲတမ်းလုပ်ဆောင်နိုင်မည်ကိုသေချာစေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ဤလမ်းညွှန်တွင်ဆွေးနွေးခဲ့သည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့သည် 1:3စွန့်စားမှု / အကျိုးခံစားခွင့်အချိုးကိုရွေးချယ်လေ့ရှိသည်။ တစ်ဖက်တွင်ဤအကျိုးအမြတ်များသည်အနည်းငယ်မျှသာဖြစ်သော်လည်းလတစ်လလုံးတွင်၎င်းတို့သည်အလျင်အမြန်တိုးပွားလာနိုင်သည်။
သို့သော်သင်ကအပြိုင်အဆိုင်အခကြေးငွေများနှင့်ကော်မရှင်မပူဇော်သောပွဲစားတစ် ဦး ကိုအသုံးပြုနေပါကသင်၏အမြတ်အစွန်းတိုးမြှင့်နိုင်သည့်သင်၏စွမ်းရည်ကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Telegram Forex အချက်ပြမှုများထဲမှ တစ်ခုတွင် သင်သည် $500 လောင်းသည်ဟု ဆိုကြပါစို့။
သင်ရွေးချယ်ထားသောပွဲစားသည် ကော်မရှင်ခ 1% ပေးဆောင်သည်- ထို့ကြောင့် အော်ဒါမှာယူမှုအတွက် $5 ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အမြတ်အစွန်းရည်မှန်းချက် 3% ကိုအောင်မြင်ပြီဖြစ်သောကြောင့် သင်၏ $500 ရှယ်ယာသည် ယခု $515 တန်ပါသည်။
သင်သည် ရာထူးမှထွက်ပြီး - ကော်မရှင်၏ 1% ကို ထပ်မံပေးဆောင်ခြင်း - စုစုပေါင်း $5.15 ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် သင်သည် ဤအထူးကုန်သွယ်မှုအတွက် ကော်မရှင်တွင် $10.15 ပေးဆောင်ခဲ့သည်။
အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်း၊ ၎င်းသည် သင်အမှန်တကယ်အမြတ်ရရှိထားသည်ထက် ကော်မရှင်တစ်ခုတွင် အခကြေးငွေ ပိုပေးသောကြောင့် ကုန်သွယ်မှုကို အနည်းငယ် အဆင်မပြေဖြစ်စေသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား 100% ကော်မရှင်မပါဘဲ ကုန်သွယ်မှုပြုနိုင်စေမည့် Forex ပလပ်ဖောင်းများကိုသာ အကြံပြုအပ်ပါသည်။
ထိုသို့လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်၊ အထက်ဖော်ပြပါကုန်သွယ်မှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ Telegram Forex အချက်ပြမှုမှရရှိသော $15 အမြတ်များအားလုံးကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကော်မရှင်များအပြင်၊ သင်ရွေးချယ်ထားသော ပွဲစားသည် တင်းကျပ်သော ပျံ့နှံ့မှုများကို ပေးဆောင်ကြောင်း သေချာစေသင့်သည်။
ဤသည်သွယ်ဝိုက်ကြေးဖြစ်ပြီးလေ့လာသူကုန်သည်များမကြာခဏသတိမမူမိသောအရာများဖြစ်သည်။ သတိမထားမိသောသူတို့အတွက် ပျံ့နှံ့ သင်၏ပွဲစားမှကမ်းလှမ်းသောငွေကြေးအတွဲ၏ ၀ ယ်ရောင်းရောင်းဈေးနှင့်ကွာခြားချက်မှာရိုးရှင်းပါသည်။ များသောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြံပြုသောပွဲစားများသည်အဓိကအားဖြင့် ၁ တွဲအောက်သာပြန့်ပွားနိုင်သည်။
ပြည့်စုံကောင်းမွန်သောမိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းကိုပေးထားသော Forex trading platform ကိုရွေးချယ်ရန်လည်းအရေးကြီးသည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်ပွဲစားမှကမ်းလှမ်းသောအရာတစ်ခုဖြစ်ပါက၎င်းသည် iOS နှင့် Android ပစ္စည်းများနှင့်သဟဇာတဖြစ်လိမ့်မည်။ ကျနော်တို့မိုဘိုင်းထင်သောအကြောင်းပြချက် ကုန်သွယ်ရေးအက်ပ်များ ကျွန်ုပ်တို့၏ Telegram အချက်ပြဝန်ဆောင်မှုအတွက်အရေးကြီးသည်မှာ forex မြင်ကွင်းသည်မယုံနိုင်လောက်အောင်မြန်သောနှုန်းဖြင့်ရွေ့လျားခြင်းဖြစ်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ချက်ချင်းလုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သော Forex trading signal ကိုပေးပို့နိုင်သည်။ သင်သည်သင်၏အဓိက desktop စက်ပစ္စည်းနှင့်ဝေးကွာပါက Telegram app မှတစ်ဆင့်အချက်ပြမှုကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ သင်၏ဖုန်းတွင်သင်၏ Forex အရစ်ကျငွေစာရင်းကိုသင်မရရှိပါကအချက်ပြမှုကိုသင်လုပ်ဆောင်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
တစ်ဖန်၊ ဤနေရာတွင် Learn2Trade တွင် အကြံပြုထားသော Forex ပလပ်ဖောင်းများအားလုံးသည် ထိပ်တန်းအဆင့်သတ်မှတ်ထားသော မိုဘိုင်းအက်ပ်များကို ပေးဆောင်ပါသည်။ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ Telegram Forex အချက်ပြမှုများထဲမှ တစ်ခုကို လုပ်ဆောင်ရန် အခွင့်အရေးကို ဘယ်သောအခါမှ လက်လွတ်မခံကြောင်း သေချာစေမည်ဖြစ်သည်။
ကြေးနန်းအပေါ် Forex Signal များ - အစီအစဉ်များနှင့်စျေးနှုန်း
Learn2Trade မှ ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်တွင်းကုန်သည်များအဖွဲ့သည် အလွန်ကြိုးစားလုပ်ဆောင်သည်ဟု မပြောဘဲနေပါသည်။ ၎င်းတို့သည် သင့်အား အကောင်းဆုံး Telegram Forex အချက်ပြမှုများကို ယူဆောင်လာရန် အာကာသထဲတွင် နှစ်ပေါင်းများစွာ အတွေ့အကြုံများကို အသုံးချသည်။
၎င်းကိုစိတ်ထဲတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ပရီမီယံအကောင့်အတွက် အခကြေးငွေကောက်ခံပါသည်။ သို့သော်၊ ကျွန်ုပ်တို့ထိုသို့မရောက်မီ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အခမဲ့ Telegram Forex အချက်ပြဝန်ဆောင်မှုကိုလည်း ပေးဆောင်သည်ကို သတိပြုရန် အရေးကြီးပါသည်။
အခမဲ့ Forex Signal များလိုင်းတစ်လျှောက်တစ်ခုခုနှင့်အတူ Google ရှာဖွေခြင်းအားဖြင့်သင်သည်ရလဒ်ထောင်ပေါင်းများစွာနှင့်ပြည့်နေလိမ့်မည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကုန်သွယ်ရေးအချက်ပြမြင်ကွင်းဟာလကိုကမ်းကပ်တဲ့ပံ့ပိုးသူတွေနဲ့ပြည့်ကျပ်နေလို့ဖြစ်တယ်။
သင်သိသည်နှင့်အမျှဤပံ့ပိုးပေးသူအများစုသည်သူတို့ပြောသောရဲရင့်သောပြောဆိုမှုများကိုမည်သည့်အခါကမျှအမှန်တကယ်မဖြည့်ဆည်းနိုင်ပါ အဲဒီအစားသူတို့ဟာရန်လိုတဲ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကျွမ်းကျင်သူတွေပါ။ နောက်ပိုင်းမှာသင့်ကိုအမြတ်အစွန်းအပြည့်အ ၀ ပေးမယ်လို့ကတိပေးပြီး၊
Forex အချက်ပြမြင်ကွင်း၏အနည်းငယ်သော 'ရိပ်မိသော' ဂုဏ်သတင်းကိုရယူခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် Learn2Trade မှပြည့်စုံသော 'အခမဲ့' signal service ကိုကမ်းလှမ်းသည်။ ဤအချက်ပြမှုများသည်အစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့သောအဓိကအချက်များဖြစ်သည့်ဝင်ပေါက်၊ ရပ်တန့်ပြီးဆုံးရှုံးမှုနှင့်အမြတ်ယူရန်အမိန့်စျေးနှုန်းများနှင့်အတူရောက်လာသည်။
တစ်နည်းဆိုရသော် ကျွန်ုပ်တို့၏ အခမဲ့ Forex အချက်ပြမှုများသည် အကြံပြုချက်အပေါ် လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များကို မီးပျက်သွားခြင်း မရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အခမဲ့နှင့် ပရီမီယံအကောင့်များ၏ အဓိကကွာခြားချက်မှာ ယခင်သည် တစ်ပတ်လျှင် Telegram Forex အချက်ပြမှု3ခုသာ ပေးဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနှင့်၊ ပရီမီယံအကောင့်သည် တစ်ရက်လျှင် ပျမ်းမျှအချက်ပြမှု5ခုရှိသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အခမဲ့ Telegram Forex အချက်ပြမှုများကို ပေးဆောင်ရခြင်း၏ အဓိကအကြောင်းရင်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ အိမ်တွင်းကုန်သည်များ၏ အဖွဲ့သည် မည်မျှ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ မြင်စေလိုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤစက်မှုလုပ်ငန်းရှိ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူအများစုကဲ့သို့ အလွန်ရဲရင့်သောတောင်းဆိုမှုများကို ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ဒါပေမယ့် အဲဒါက ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ဖြတ်မှာမဟုတ်ဘူး။ ယင်းအစား၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ အခမဲ့ Forex အချက်ပြမှုများဖြင့် စတင်ခြင်းဖြင့်၊ သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုန်သွယ်မှု အကြံပြုချက်များကို တစ်ရာခိုင်နှုန်းမျှ မစွန့်စားဘဲ စမ်းသပ်နိုင်သည်။
တကယ်တော့၊ မင်းရဲ့ကုန်သွယ်အရင်းအနှီးကို စွန့်စားဖို့တောင် မလိုအပ်ပါဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့၏အကြံပြုချက်များကို စမ်းသပ်ရန် Forex သရုပ်ပြအကောင့်ကို သင်အသုံးပြုနိုင်သကဲ့သို့။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရာတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ Telegram Forex အချက်ပြမှုများသည် သင်၏ဘဏ္ဍာရေးပန်းတိုင်များနှင့် စွန့်စားရမည့်သဘောထားအတွက် မှန်ကန်မှုရှိမရှိ အကဲဖြတ်နိုင်ပါသည်။
ပရီမီယံ Forex အချက်ပြ
Learn2Trade အဖွဲ့ဝင်များ၏ အမြောက်အမြားသည် ပရီမီယံအကောင့်တွင် ရှိနေပါသည်။ ယင်းအတွက် အဓိကအကြောင်းရင်းမှာ ပရီမီယံအဖွဲ့ဝင်များသည် Telegram Forex အချက်ပြမှုများကို တစ်နေ့တာလုံး လက်ခံရရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အချိန်ဇုန်အားလုံးကို အကျုံးဝင်သည် - ထို့ကြောင့် သင်မည်သည့်နေရာတွင် အခြေစိုက်သည်ဖြစ်စေ အရေးမကြီးပါ - သင့်တွင် ငွေရှာရန် အခွင့်အလမ်းများစွာရှိသည်။
အထက်ဖော်ပြပါ ကဏ္ဍတွင် ကျွန်ုပ်တို့မှတ်သားထားသည့်အတိုင်း ပရီမီယံအကောင့်သည် တစ်နေ့လျှင် Telegram forex အချက်ပြမှု5ခုပါရှိသည်။ ယခု၊ ဈေးနှုန်းအရ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အချိန်မရွေး ပယ်ဖျက်နိုင်သော တရားမျှတပြီး ရိုးရှင်းသော လစဉ်ပက်ကေ့ချ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ မေးခွန်းတွေ မမေးဘူး။
တစ်လလျှင် £40 - လစဉ်ငွေတောင်းခံပါသည်။
သုံးလအတွက် £89 (တစ်လလျှင် £29.67) – သုံးလတစ်ကြိမ် ကောက်ခံပါသည်။
ခြောက်လအတွက် £129 (တစ်လလျှင် £21.5) – နှစ်စဉ် ဘီလ်ဆောင်ပါသည်။
ခြောက်လအတွက် £215 (တစ်လလျှင် £17.92) – နှစ်စဉ် ကောက်ခံပါသည်။
အထက်တွင်တွေ့မြင်ရသည့်အတိုင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ Telegram Forex အချက်ပြစျေးနှုန်းများသည် အလွန်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည် ။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရလျှင် - ငွေကြေးအရောင်းအ၀ယ်အခင်းအကျင်းတွင် ရေရှည်အမြတ်အစွန်းများရယူရန် အလေးအနက်ထားလျှင် အမြင့်ဆုံးလစဉ်ကြေး £40 သည် အလွန်အပြိုင်အဆိုင်ဖြစ်သည်။
သေချာပါတယ်၊ သင်အနည်းငယ်ပိုကြာတဲ့အစီအစဉ်အတွက်စာရင်းသွင်းပါက၊ သင်သည်ဤစျေးနှုန်းကိုပိုမိုကျဆင်းစေသည်။ မမေ့ပါနှင့် – ကျွန်ုပ်တို့သည် Learn2Trade တွင် သင်ရုန်းထွက်၍မရသော သဘောတူညီချက်တစ်ခုတွင် သင့်အား မည်သည့်အခါမျှ သော့ခတ်မထားပါနှင့်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနှင့်၊ သင်သည် သင်၏စာရင်းသွင်းမှုကို သတ်မှတ်ထားသည့်အချိန်တွင်မဆို ပယ်ဖျက်နိုင်သည်။
မှတ်ချက်- ကျွန်ုပ်တို့၏ ပရီမီယံ Forex အချက်ပြမှုများကို တစ်နှစ် အခမဲ့ ရယူနိုင်ပါသည်။ သင်လုပ်ရမှာက Longhorn FX နဲ့ အကောင့်ဖွင့်ပြီး ငွေသွင်းပါ။ ထို့နောက် အီးမေးလ်ပို့ပါ။ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်] ၀ င်ရောက်ရန်သင်၏ငွေကြေးထောက်ပံ့ထားသောအကောင့်၏ပုံတစ်ပုံနှင့်အတူ!
Trade Telegram Forex Signal ၂ ခု - လစဉ်ပစ်မှတ်များကိုလေ့လာပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏ တစ်ဦးချင်း Telegram Forex အချက်ပြမှုများကဲ့သို့ပင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ အိမ်တွင်းကုန်သည်များအဖွဲ့တွင် ၎င်းတို့သည် လစဉ် ၎င်းတို့သတ်မှတ်ထားသော ပစ်မှတ်များစွာရှိသည်။ ဤအရာ၏ ရှေ့ဆုံးတွင် လစဉ် 'အနိုင်ရနှုန်း' သည် 76% ဖြစ်သည်။ အနိုင်ရနှုန်းအချိုးသည် မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကို သင်မသိပါက၊ ဤသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏အချက်ပြမှုများ တစ်လတာကာလအတွင်း ရရှိခဲ့သော အောင်မြင်သောကုန်သွယ်မှုရာခိုင်နှုန်းများဖြစ်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ Telegram Forex အချက်ပြမှုများသည် ဒီဇင်ဘာလတွင် အကြံပြုချက် 100 ပေးပို့သည်ဟု ဆိုကြပါစို့။ ဤကုန်သွယ်မှု 100 တွင် 76% သည် 76% အမြတ်ထွက်သည်ဟု ဆိုလိုပြီး ကျန် 24% သည် အမြတ်မရရှိဟု ဆိုလိုပါသည်။
ထိုသို့ပြောကြားခြင်းဖြင့်အနိုင်ရရှိမှုနှုန်းသည်လစဉ်“ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှပြန်လာ” (ROI) နှင့်လုံးဝကွဲပြားခြားနားကြောင်းသတိပြုရန်အရေးကြီးသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရင်ကကျွန်တော်တို့ဟာသတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ကာလအတွင်းမှာငါတို့ဘယ်လောက်ကုန်သွားတယ်၊ ဆုံးရှုံးခဲ့တာလဲဆိုတာကိုသာပြောတာလေ။ သို့သော်နောက်လတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏စုစုပေါင်းအစုရှယ်ယာအပေါ် မူတည်၍ တစ်လအတွင်းမည်မျှအမြတ်အစွန်းရခဲ့ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောပြသည်။
ဥပမာ: ငွေကြေးထောက်ပံ့ Forex အကောင့်
ဇန်န၀ါရီလတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ Telegram Forex အချက်ပြမှုများသည် ROI 35% ကို ထုတ်ပေးခဲ့သည်ဆိုပါစို့။
စုစုပေါင်း၊ သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုန်သွယ်မှု အကြံပြုချက် 100 ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သည် - ရာထူးတစ်ခုစီအတွက် $50 လောင်းကြေး။
ဆိုလိုသည်မှာ စုစုပေါင်း သင့်ကုန်ကျစရိတ်မှာ $5,000 ဖြစ်သည်။
ဒီကိန်းဂဏန်းထဲက 35% က မင်းအမြတ်တွေရခဲ့တယ်။
ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, သင် $ 1,750 လုပ်လေ၏။
ဤသည်မှာ သင်၏လစဉ်အမြတ်အစွန်းနှင့် အရှုံးများကို တွက်ချက်ရန် အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့၊ သင်သည်အမြဲတမ်းတူညီသောပမာဏကိုသေချာပေါက်လောင်းမည်မဟုတ်ပါ။ တကယ်တော့၊ မင်းရဲ့ကုန်သွယ်မှုပမာဏဟာ နေရာတစ်ခုစီမှာ ကွဲပြားနေမယ်ဆိုတာ သေချာပေမယ့် အားလုံးသေချာနိုင်ပါတယ်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်၏ပထမဆုံးကုန်သွယ်မှုသည်အစကန ဦး ဒေါ်လာ ၅၀၀၀ အကောင့်လက်ကျန်၏ ၁% ကိုအန္တာရာယ်ရှိသော်လည်းသင်၏ဒသမကုန်သွယ်မှုသည်ဒေါ်လာ ၆၀၀၀ လက်ကျန်၏ ၁.၅% ကိုစွန့်စားနိုင်သည်။ ဤနေရာတွင်အဓိကအချက်မှာကျွန်ုပ်တို့၏သမိုင်း ၀ င်မှုနှုန်း ၇၆% သည်အရေးကြီးသော်လည်းသင်၏ကုန်သွယ်မှုအရင်းအနှီးတစ်ခုလုံး၏ရာခိုင်နှုန်းနှင့်ယှဉ်လျှင်ရာခိုင်နှုန်းမည်မျှမြှောက်နေသည်ကိုသင်သတိရရန်လိုအပ်သည်။
အခြား Forex Signals ကြေးနန်းအဖွဲ့များ
ကျွန်ုပ်တို့သည် Learn2Trade မှကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ဝင်များအားအသိပေးဆုံးဖြတ်ချက်များချစေလိုပါသည်။ ဒါကိုစိတ်ထဲထားခြင်းအားဖြင့်၊ အောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စျေးကွက်တွင်လက်ရှိရှိအခြား Telegram Forex အချက်ပြအုပ်စုများစွာကိုဆွေးနွေးကြသည်။
အဖွဲ့ဝင် 21,000 ကျော်ဖြင့် FXStreet သည် တက်ရောက်သူများပြားသည့် Telegram အချက်ပြအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်သည်။ ယင်းမှာ အများအားဖြင့် ၎င်းတို့၏ အသက်ရှည်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့သည် လည်ပတ်နေသည်မှာ ၁၀ နှစ်ကျော်ပြီဖြစ်သည်။ အဖွဲ့ဝင်များစွာကို ဆွဲဆောင်နိုင်မည်မဟုတ်သောကြောင့် ၎င်းသည် အဖွဲ့၏ထိရောက်မှုကိုလည်း အခိုင်အမာပြောပါသည်။
သံသယမရှိဘဲ၊ အဖွဲ့သည် 90% တိကျမှုနှုန်းအပြင် တစ်ပတ်လျှင် 600 pips အထိရရှိခြင်းကဲ့သို့သော ရဲရင့်သောတောင်းဆိုမှုများကို ပြုလုပ်သည်။ FX Street တွင် ၎င်း၏ အားကောင်းသည့် အင်္ဂါရပ်များကို ထည့်သွင်းထားသည့် Telegram အဖွဲ့မှလွဲ၍ ဝဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုရှိသည်။ ပညာရေးဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများ၊ Forex စျေးကွက်သို့ ထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်သော၊ အရေးကြီးသော သတင်းတိုးတက်မှုများနှင့် အချိန်နှင့်တပြေးညီ ငွေလဲနှုန်းများသည် ၎င်း၏ အကောင်းဆုံး ကမ်းလှမ်းမှုများထဲတွင် ပါဝင်ပါသည်။ အပတ်စဉ် webinars များနှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု ဗီဒီယိုများအပါအဝင် ၎င်းတို့အားလုံးကို ပရီမီယံအစီအစဉ်တွင်သာ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
သငျသညျအများအပြားငွေပေးချေမှု options များထဲကနေရွေးချယ်နိုင်သည်။ ၎င်းတွင်လစဉ်ဒေါ်လာ ၃၅ ကုန်ကျမည့်အစီအစဉ်၊ တစ်လလျှင်ဒေါ်လာ ၃၁.၆၆ လျှော့ချရန်အစီအစဉ်နှင့်တစ်လလျှင်ဒေါ်လာ ၂၆.၆၆ အတွက် ၆ လစီမံကိန်းဖြစ်သည်။ သင်ငွေပေးချေပြီးသည်နှင့် ၂၄ နာရီဖောက်သည်အထောက်အပံ့ပေးသော Telegram group ကိုသင်ရနိုင်သည်။
FX Pro သည်အိမ်တွင်းကုန်သည်လေး ဦး နေထိုင်သည့်အချက်ပြပေးသူဖြစ်သည်။ ဤအတွေ့အကြုံရှိကုန်သည်များသည်စျေးကွက်အမျိုးမျိုးကိုအချိန်ဇုန်များအလိုက်စစ်ဆေးပြီးကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်ရန်အကောင်းဆုံးအခွင့်အလမ်းကိုရှာဖွေကြသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအခွင့်အလမ်းများကိုသူတို့သိရှိပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်သင့်အားအချက်ပြတွေ့ရှိချက်များကိုအမြန်ဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်အောင်သင့်အားချက်ချင်းအသိပေးမည်။
FX Pro သည် Forex အချက်ပြဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်နေရာ၌ အတော်အတန်ရေပန်းစားသည်။ အခြားသော အချက်ပြဝန်ဆောင်မှုပေးသူများကဲ့သို့ပင်၊ ၎င်းတို့သည် ပံ့ပိုးပေးထားသည့် အချက်ပြမှု ၁၀၀ လျှင် ၈၉ ၏ အောင်မြင်မှုနှုန်းကို အခိုင်အမာပြောဆိုကြသည်။ ၎င်းတို့သည် တစ်ပတ်လျှင် pips 89 ကျော် တောင်းဆိုသည်။
FX Pro သည်၎င်းတို့အားအပတ်စဉ်ကြေးပေးသွင်းခြင်းဖြင့်အခြားပံ့ပိုးသူများနှင့်ခွဲခြားရန်တောင်းဆိုသည်။ အပတ်စဉ်အစီအစဉ်သည်ဒေါ်လာ ၇ ကုန်ကျပြီးသင်ပိုမိုကြာရှည်ခံရန်သင်ဆုံးဖြတ်လိုကြောင်းကြိုတင်ဆုံးဖြတ်နိုင်သည် - သရုပ်ပြအကောင့်ကို အသုံးပြု၍ သူတို့၏ထိရောက်မှုကိုစမ်းသပ်ရန်။ သင်မြင်သောအရာကိုကျေနပ်လျှင်သင်လစဉ်သို့မဟုတ်သုံးလတစ်ကြိမ်အစီအစဉ်ကိုသွားနိုင်သည်။
ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော subscription အစီအစဉ်များသည် ၃ လနှင့်တစ်နှစ်ဖြစ်ပြီးဒေါ်လာ ၁၂၀ နှင့် ၃၈၀ အသီးသီးကျသင့်သည်။ သူတို့သည် Telegram အုပ်စုကိုအကန့်အသတ်ဖြင့်သာဝင်ခွင့်ပေးသည့်ဒေါ်လာ ၅၀၀ သက်တမ်းရှိအသင်းဝင်ကြေးလည်းရှိသည်။
Pipchasers သည် လေးနှစ်ခန့်သာ လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး အတော်လေး ငယ်ပါသည်။ Forex တွင် အချက်ပြမှုများ ပံ့ပိုးပေးသည့်အပြင် အဖိုးတန်သတ္တုများဆိုင်ရာ စျေးကွက်လှုပ်ရှားမှုအတွက် အကြံပြုချက်များလည်း ရရှိသည် (ငှေ နှင့် ရှေ) Pipchasers မှ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသူများအဖွဲ့သည် အကြံပြုထားသောကုန်သွယ်မှုများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဇယားသုတေသနကို လုပ်ဆောင်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ Pipchasers ၏အကြံပြုချက်တစ်ခုစီသည် Learn2Trade ၌ပြုလုပ်သည့်အတိုင်းငွေကြေးအတွဲမှသည်အမြတ်အစွန်းနှင့်ရပ်တန့်ခြင်းဆုံးရှုံးမှုစျေးအထိသာမကစျေးကွက်သို့မည်သည့်အချိန်၌ ၀ င်ရောက်နိုင်သည်တို့ကိုပါဖုံးလွှမ်းထားသည်။ လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်အားလုံးကို Telegram အဖွဲ့သို့အချိန်နှင့်တပြေးညီရောက်ရှိသွားသည်။
အကျိုးအမြတ်သည် Pipchasers မှအဖွဲ့၏အဆိုအရတစ်လလျှင် pips ၁၅၀၀ အထိရှိသည်။ တစ်နေ့လျှင်အချက်ပြ ၃ ကြိမ်အထိပေးပို့ခြင်းဖြင့်၎င်းကိုအောင်မြင်ရန်သူတို့ကတောင်းဆိုသည်။ အခြားပံ့ပိုးသူများနှင့်ကဲ့သို့ပင်ကြေးပေးဆောင်ရပါသည်။
တူညီသော ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် အစီအစဉ် သုံးခုရှိသည်။ သို့သော် အချက်ပြမှုများကို ဆက်လက်လက်ခံလိုသောအချိန်အတိုင်းအတာနှင့်သာ ကွာခြားပါသည်။ အစီအစဉ်များသည် တစ်လလျှင် $59 မှ $149 မှ သုံးလအတွက် $249 နှင့် ခြောက်လအတွက် $XNUMX စတင်ပါသည်။ သင်၏စာရင်းသွင်းမှုကို သင်ဆန္ဒရှိအချိန်မရွေး ပယ်ဖျက်နိုင်သည်။
၎င်းသည်ယူကေအခြေစိုက် Forex အချက်ပြပေးသူဖြစ်သည်။ Forex Institute သည် Pipchasers ကဲ့သို့ ၈၅ ရာခိုင်နှုန်းအောင်မြင်မှုနှင့်လစဉ် pips ၁၅၀၀ အထိရဲရင့်သောတောင်းဆိုမှုများရှိသည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့ဆွေးနွေးခဲ့သည့်အခြားပံ့ပိုးသူများနှင့်ဆင်တူသည်မှာ၎င်းတို့သည်အချက်ပြချက်များကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီပို့ပေးသည်။
အချက်ပြမှုများသည် အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်ရန် ငွေကြေးအတွဲများ၊ အဝင်ပေါက်နှင့် အထွက်စျေးနှုန်းများ၊ နှင့် ဝယ်ရန် သို့မဟုတ် ရောင်းရန်အမှာစာများကဲ့သို့ လိုအပ်သော ဒေတာအစုံအလင်ကို လွှမ်းခြုံထားသည်။ Forex Institute သည် Telegram အဖွဲ့နှင့် WhatsApp တွင်ပင် ဖောက်သည်များအား ချက်ခြင်းပံ့ပိုးပေးပါသည်။
ဤ forex အချက်ပြမှုများကို ဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိရန် တစ်လအတွက် သင်သည် $50 ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် သရုပ်ပြအကောင့်ရှိ အချက်ပြမှုများကို စမ်းသပ်ရန် ၃ ရက်ကြာ အစမ်းသုံးကာလ ပါဝင်သည်။ ၎င်းတို့၏ အရေးဆိုမှုများကို အတည်ပြုရန် အချိန်တိုလွန်းသည်ဟု ထင်သည့်အတွက် သင်သည် အပြစ်မတင်နိုင်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် Forex စျေးကွက်များသည် အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ရွေ့နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
သို့သော်သင်ပံ့ပိုးသူနှင့်မကျေနပ်ပါကအချိန်မရွေးအစီအစဉ်ကိုဖျက်သိမ်းနိုင်သည်။ အကောင်းဆုံးလုပ်သင့်သည်မှာ demo account ပေါ်ရှိအချက်ပြမှုကိုစစ်ဆေးသည့်အချိန်ကိုသုံးခြင်းဖြစ်သည်။ သင်ပယ်ဖျက်ရန်ဆုံးဖြတ်ပါကသင်ရှုံးမည့်အရာအားလုံးသည်အစီအစဉ်အတွက်ကန ဦး ဒေါ်လာ ၅၀ ဖြစ်သည်။ သင်၏ကုန်သွယ်မှုပမာဏ၏ရာခိုင်နှုန်းအများစုနှင့်ဆန့်ကျင်သည်။
Forex Signal Telegram Group တွင်မည်သို့ပူးပေါင်းရမည်နည်း
၁၀၀% ပွင့်လင်းမြင်သာမှု၊ ထိပ်တန်း Forex signal Telegram group သို့ဆက်သွယ်ခြင်းသည်သင်ကြိုက်နှစ်သက်ပါကယခုစတင်ရန်အောက်ပါအဆင့်များကိုလိုက်နာပါ။
အဆင့် ၁: Forex ပွဲစားစာရင်းဖွင့်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့အစောပိုင်းတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း၊ သင်၏အချက်ပြမှုများကိုလုပ်ဆောင်ရန်အတွက် သင့်တွင်တက်ကြွသော Forex ပွဲစားအကောင့်တစ်ခုရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ သင်နှစ်သက်သော ပွဲစားနှင့် အကောင့်တစ်ခုရှိနှင့်ပြီးပါက- နောက်တစ်ဆင့်သို့ ကျော်သွားနိုင်ပါသည်။
မရရှိလျှင်အကောင်းဆုံးလမ်းညွှန်ကိုသင်ဖတ်ရှုနိုင်သည် Forex ပွဲစားများ ဒီမှာ။ ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်ချက်ကိုဖတ်ရန် အချိန်မရှိပါသလား။ ကောင်းပြီ၊ အကယ်၍ သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အချက်ပြမှုများနှင့်အတူ အသုံးပြုရကျိုးနပ်မည့် Forex ကုန်သွယ်မှုဆိုက်ကို လမ်းညွှန်ရန်ရှာဖွေနေပါက - သင်သည် Capital.com ကို စမ်းသုံးကြည့်ချင်ပေမည်။
ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများချမှတ်သည့်အကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီသည်သင့်အား Forex အတွဲအမြောက်အများကိုကော်မရှင်မလိုဘဲကုန်သွယ်ခွင့်ပြုသည်။ ပြန့်ပွားမှုများသည်အလွန်တင်းကျပ်ပြီးသင်အလွယ်တကူငွေသွင်းနိုင်သည်၊ ထုတ်ယူနိုင်သည်။
အဆင့် ၂။ Learn2Trade Signal အစီအစဉ်ကိုရွေးချယ်ပါ
သင့်တွင်တန်ဖိုးနည်းသော Forex brokerage account တစ်ခုရှိပါကသင်ရွေးချယ်မည့် Learn2Trade အစီအစဉ်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်သည်။ သင်သည်အချက်ပြအသစ်များနှင့်အသစ်စတင်လိုပါကအခမဲ့အစီအစဉ်နှင့်စတင်နိုင်ပါသည်။ ၎င်းသည်တစ်ပတ်လျှင်အချက်ပြမှု ၃ ခုရရှိလိမ့်မည်။
တစ်ပတ်လျှင် အချက်ပြမှု3ခုသည် သင့်အတွက် မဖြတ်တောက်ပါက၊ ပရီမီယံအစီအစဉ်သည် သင့်အား တစ်နေ့လျှင် အချက်ပြမှု5ခုခန့် ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ရေရှည် ကတိကဝတ်များ မပြုလုပ်မီ ပရီမီယံ အစီအစဉ်ကို စမ်းကြည့်လိုပါက၊ ဈေးနှုန်းများသည် တစ်လအတွက် £40 မှ စတင်ပါသည်။ စျေးလျှော့ချင်ရင်3လ နဲ့6လ ပက်ကေ့ချ်တွေကို ကောင်းကောင်းစဉ်းစားပါ။
အဆင့် ၃။ Telegram ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးရယူပါ
သင့်တွင် Learn2Trade signal အစီအစဉ်တစ်ခုရှိသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်၊ သင်သည် Telegram အက်ပ်ကို သင့်ဖုန်းတွင်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ တရားဝင် Telegram စတိုးကနေ တိုက်ရိုက်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ သို့မဟုတ် ၎င်းကို ရှာဖွေပါ။ Google Play စ / Apple ကပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်.
ထို့နောက် Learn2Trade Telegram အဖွဲ့သို့ဝင်ရောက်ပါ။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်သင်သည်သင်၏တယ်လီဖုန်းသို့တိုက်ရိုက်တယ်လီဂရမ် Forex အချက်အလက်များကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။
Forex Signals ကြေးနန်းလမ်းညွှန် - စီရင်ချက်လား။
အချုပ်အားဖြင့် Learn2Trade Telegram အဖွဲ့မှ Forex အချက်ပြမှုကိုလက်ခံခြင်းသည်သင်အားမည်သည့်စာရွက်စာတမ်းမှလုပ်စရာမလိုဘဲငွေကြေးရောင်းဝယ်မှုကိုခွင့်ပြုလိမ့်မည်။
ဆိုလိုသည်မှာ နည်းပညာဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် အခြေခံကျသော ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု မရှိခြင်း - နှင့် နောက်ဆုံးသုတေသနစျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုများအတွက် သင့်စက်တွင် နာရီပေါင်းများစွာ ထိုင်နေရန် မလိုအပ်ပါ။ ယင်းအစား၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ Telegram Forex အချက်ပြမှုများသည် ကုန်သွယ်မှုအခွင့်အလမ်းတစ်ခုရောက်ရှိလာသည်နှင့်တပြိုင်နက် သင့်ဖုန်းသို့ အသိပေးချက်တစ်ခု ပေးပို့မည်ဖြစ်သည်။ စတင်သူများအတွက် အကောင်းဆုံး Forex ကုန်သွယ်မှုပလပ်ဖောင်း UK ကို သင်အသုံးပြုကြောင်း သေချာပါစေ။
အပြည့်အဝလေ့လာလိုပါက2Trade signal experiences – လည်းပါဝင်ပါသည်။ cryptocurrencies, ကုန်စည်နှင့် စတော့ရှယ်ယာ - ကျွန်ုပ်တို့၏ ပရီမီယံအကောင့်သည် သင့်အား တစ်နေ့လျှင် ပျမ်းမျှ အကြံပြုချက်5ခု ပေးနိုင်သည်။ ၎င်းသည် ရက် 30 ငွေပြန်အမ်းပေးသည့်အာမခံလည်းပါရှိသည်။ ထို့ကြောင့် သင်သည် မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်မျှ မပျော်ရွှင်ပါက၊ သင်သည် ပြန်အမ်းငွေ အပြည့်အစုံကို တောင်းဆိုနိုင်သည် - မေးခွန်းများမမေးပါ။
Forex အချက်ပြ Telegram အဖွဲ့ဆိုတာ ဘာလဲ။
နာမည်အကြံပြုထားသည့်အတိုင်း၊ ၎င်းသည် Learn2Trade မှပေးဆောင်သော Forex အချက်ပြဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည် - သင့်အား သင်၏ Telegram အက်ပ်ထံသို့ ကုန်သွယ်မှုအကြံပြုချက်များကို တိုက်ရိုက်ပေးပို့မည်ဖြစ်သည်။
Learn2Trade Telegram Forex အချက်ပြဝန်ဆောင်မှု၏ အနိုင်ရနှုန်းကဘာလဲ။
သမိုင်းကြောင်းအရကျွန်ုပ်တို့သည် ၇၆% အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့ပေးပို့လိုက်သောအချက်ပြမှု ၁၀၀ လျှင် ၇၆ ခုသည်အမြတ်အစွန်းပြန်ရလိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်။
သင်၏ Forex အချက်ပြဝန်ဆောင်မှုသည် တရားဝင်မှုရှိမရှိ မည်သို့သိနိုင်မည်နည်း။
ကျနော်တို့ Forex signal ကိုမြင်ကွင်းတစ်ခုလိမ်လည်မှုအနုပညာရှင်တွေကလွှမ်းမိုးကြောင်းနားလည်ပါသည်။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာအကာအကွယ်များစွာကိုကမ်းလှမ်းတာဖြစ်တယ်။ ပထမ ဦး စွာကျွန်ုပ်တို့၏ပရီမီယံအစီအစဉ်သည်ရက် ၃၀ ငွေပြန်အမ်းခြင်းအာမခံနှင့်အတူပါ ၀ င်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုမကျေနပ်လျှင်မည်သည့်အကြောင်းပြချက်ကြောင့်မဆိုဤကာလအတွင်းမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုအပြည့်အဝပြန်အမ်းငွေတောင်းခံနိုင်သည်။ ထို့အပြင်အခမဲ့ signal ကိုလည်းပေးသည်။ ၎င်းသည်တစ်ပတ်လျှင်အချက်သုံးချက်ကိုရရှိမည်ဖြစ်ပြီး၊ သင်ပရီမီယံအကောင့်သို့အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းမပြုမီကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုစမ်းသပ်မောင်းနှင်နိုင်သည်။
သင်၏ Telegram Forex အချက်ပြဝန်ဆောင်မှုသည် မည်သည့်အတွဲများ အကျုံးဝင်သနည်း။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Forex အချက်ပြဝန်ဆောင်မှုသည် အတွဲများစွာကို လွှမ်းခြုံထားသည်။ အများစုသည် အဓိကနှင့် အသေးအဖွဲ အမျိုးအစားများအတွင်းမှ လာသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း ထူးခြားဆန်းပြားမှုများကို ဖုံးကွယ်ထားသည်။
သင်၏ Telegram Forex အချက်ပြမှုများသည် အဘယ်ကဲ့သို့ ဖြစ်သနည်း။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Forex အချက်ပြမှုများအားလုံးသည် သင်ဝယ်သင့်သည် သို့မဟုတ် ရောင်းသင့်သည်ဖြစ်စေ၊ ဝင်ပေါက်စျေးနှုန်း၊ ရပ်တန့်အရှုံးနှင့် အမြတ်အစွန်းစျေးနှုန်းတို့နှင့်အတူ လာပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Telegram Forex Signal Guide နှင့်ပတ်သက်သည့် နောက်ထပ်ဆောင်းပါးများကို ဖတ်ရှုပါ-
အကောင်းဆုံး Forex ပွဲစား 2022
အကောင်းဆုံး FCA ပွဲစား 2022 - သင်ကြားမှု2ကုန်သွယ်မှု
အကောင်းဆုံး Forex ရောင်းဝယ်ရေး ပလပ်ဖောင်းများ – 2021 နှင့် 2022 တွင် မည်သည့် Forex Trading Platform သည် အကောင်းဆုံးဖြစ်သနည်း။
၂၀၂၁ အကောင်းဆုံး Forex အညွှန်းကိန်းများ
၂၀၂၀ ၏အကောင်းဆုံး Forex Trading သိကောင်းစရာများ
2 ကုန်သွယ်မှု 2022 Forex စက်ရုပ်သုံးသပ်ချက်များကိုလေ့လာပါ
Mini & Micro Accounts 2022 ရှိအကောင်းဆုံး Forex ပွဲစားများ
Best Forex Demo Account 2022 - ပြည့်စုံသူများအတွက်လမ်းညွှန်
၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်ကုန်သည်များအတွက်အကောင်းဆုံး Forex ဆု ၁၀ ခု
Forex ကိုဘယ်လိုစောင်မလဲ - PRO လိုပဲကုန်သွယ်မှု! 2022
အကောင်းဆုံး Forex EAs 2022
ကျွန်ုပ်တို့၏ VIP Signals များကို တစ်သက်တာအသုံးပြုခွင့်ရရန် Eightcap ဖြင့် $250 အပ်နှံလိုက်ပါ။
VIP အချက်ပြမှုများကို ရယူပါ။